Wararka - Asalka taayirada albaabka
Asalka ah giraangiraha albaabka：
Sida ku xusan Taariikhda Guud ee Adduunka, giraangiraha markii ugu horreysay waxay ka soo muuqdeen Mesobotamiya, Shiinaha dhexdoodana, giraangiraha waxay u muuqdeen qiyaastii 1500 BC. Adoo rogaya giraangirta, Khilaafka dusha sare ee xiriirka si weyn ayaa loo yareyn karaa, walxaha culusna si fudud ayaa looga wareejin karaa hal meel oo loo wareejiyaa meel kale, taasoo si wax ku ool ah u yareynaysa qiimaha shaqada.
Giraangir albaabka lagu codsado waa qorshe weyn. Giraangiraha albaabku wuxuu ka yimid Shiinaha wuxuuna ku faafay Kuuriya, Japan iyo dalal kale oo ay weheliso dhaqanka Shiinaha. Masawirrada qadiimiga ah ee Shiinaha qaarkood waxaa lagu arki karaa albaabbo isdaba-joog ah oo firidhsan, sida sawirrada muuqaalka dhulka ee Dynasty, waxaa jira albaabbo is rogrog ah.
Bilowgii qarnigii 19aad, Stephenson-kii Ingiriiska wuxuu soo saaray tareenkii ugu horreeyay adduunka. Soo bixitaanka tareenka wuxuu dhiirrigeliyay hal-abuurka biraha iyo giraangiraha tareenada oo ay kujiraan flanges Lugaha tareenka ee leh flanges waxay ku habboon yihiin in laga hortago tareenada inay siibtaan oo leexdaan markay xawaare sare ku socdaan ama ay leexanayaan. Naqshadeynta giraangiraha tareenkan ayaa markii dambe lagu dabaqaygiraangiraha albaabka.
Bilowgii qarnigii 19aad, Stephenson-kii Ingiriiska wuxuu soo saaray tareenkii ugu horreeyay adduunka. Soo bixitaanka tareenka wuxuu dhiirrigeliyay hal-abuurka biraha iyo giraangiraha tareenada oo ay kujiraan flanges Lugaha tareenka ee leh flanges waxay ku habboon yihiin in laga hortago tareenada inay siibtaan oo leexdaan markay xawaare sare ku socdaan ama ay leexanayaan. Naqshadeynta giraangiraha tareenkan ayaa markii dambe lagu dabaqaygiraangiraha albaabka
Dhamaadkii qarnigii 20aad, dalabkii giraangiraha albaabkakoray. Si kastaba ha noqotee, kahor 2002, ma jirin wax soosaarayaal xirfadlayaal ah oo giraangiraha albaabka ka sameeya Shiinaha, suuqa gawaarida albaabka waxaa fadhiyay noocyo shisheeye sida Taiwan, Mareykanka, Jarmalka, Japan iyo wixii la mid ah. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan shirkado gudaha ah oo la tartami kara iyaga. Soosaarayaasha gudaha ee Dinggu Hardware ayaa markii ugu horeysay soo saaray oo soo saaray giraangiraha sudhan. Soosaarida giraanta albaabka ha noqoto tiknoolajiyad ama tayo ahaanba waxay la jaanqaaday heerka adduunka ee wiishka kor u qaadista, iyo xitaa dhinacyada qaarkood way dhaaftay.
Waxyaabaha wheel wheel qaadista waa mid aad u kala duwan, qalabka qolofka ugu weyn waxaa ka mid ah birta birta ah, zinc alloy, alloy copper, iwm, oo leh sawir bir ah oo birta ah, calaamadeynta luul, sumcad dhalaalaysa, iftiin dhalaalaya iyo daaweyn kale oo dusha sare ah.
Waxyaabaha gawaarida albaabka:
Sida ku cad maaddada wheel albaabka,waxaa jira rullaluistemadka biraha, rullaluistemadka caag adag, rullaluistemadka dhalista caag ah, rullaluistemadka dhalista nylon fiber iyo rullaluistemadka isku dhafan multilayer. Dareenka duubka caagga ah ee caaggu waa jilicsan yahay, waxaa loo isticmaali karaa oo keliya wax ka yar 60KG ee albaabka, birta birta xoog leh, laakiin la xiriirida wadada way fududahay in la soo saaro buuq; POM wuxuu leeyahay aalado farsamo oo wanaagsan, u adkeysigiisa daalku waa kan ugu sarreeya ee kuleylka kuleylka leh, isweydaarsiga laastikada ayaa ka wanaagsan naylon 66, ABS, polycarbonate, heerkulka isticmaalka ballaaran. POM rullaluistemadka caaga shaashadda adag, sibidhka siman, waara, waxqabadka waxqabadka waa adag tahay in la xakameeyo, kaliya dhowr soo saarayaasha gudaha ayaa soo saari kara, adoo isticmaalaya rullaluistemadka adag ee POM, dhalista waxaa la dhigayaa bartamaha jirka ugu muhiimsan, ilaalinta, ka dhig saameynta isbadalku fiican, laakiin sidoo kale more adkeysi.